लोकप्रिय गायक उदितनारायण झाको आज जन्मदिन, उदितको बारेमा थप जानकारी यस्तो छ – Dainik Sangalo
December 1, 2020 398
आज प्रेमिका श्वेतासंग विवाह गर्दै आदित्य नारायण झा
काठमाडौं । गायक तथा ‘इन्डियन आइडल १२’ का होस्ट आदित्य नारायण झाले १ डिसेम्बर अर्थात आज विवाह गर्दैछन् । बलिउडका चर्चित गायक उदित नारायण तथा गायिका दीपा झाका एक मात्र छोरा आदित्यले आँफैले रोजेकी केटीसँग बाबु आमाले मञ्जुरी दिएसँगै आज विबाह गर्न लागेका हुन् ।
आदित्य र श्वेताको विवाह मन्दिरमा साधारण तवरबाट हुने र जम्मा ५० जना मानिसहरु मात्र सहभागी हुने भारतीय मिडियाले जनाएको छ । समाचारमा जनाइए अनुसार विबाहमा कम मानिसहरु सहभागी हुने भएता पनि विवाहपछि भव्य रिसेप्सन पाटी आयोजना हुनेछ ।जसमा नेता, अभिनेतालगायत ठुलाठुला हस्तीको सहभागीता रहनेछ । आदित्यको २ डिसेम्बरमा रिसेप्सन पार्टीको आयोजना हुनेछ ।
Nextबीर अस्पताल अगाडी ढलको पोखरी बन्दा चाही महानगरको इ’ज्जत जाँदैन ?
एसइई परीक्षा अब कक्षा १२ मा सञ्चालन हुने!
एक्कासी जमिन भास्सिएपछि कारहरु यसरी विलाए (हेर्नुहोस भिडियो )
आज मंसिर २९ गते सोमवार निकै राम्रो छ यी राशिको भाग्य, दैनिक राशिफल